कोरियन भाषा परीक्षाको अनलाइन आवेदन भर्न राती देखि बैंकमा लाइन. – Sabaikoaawaj.com
कोरियन भाषा परीक्षाको अनलाइन आवेदन भर्न राती देखि बैंकमा लाइन.
बुधबार, चैत्र ९, २०७३ 8:36:37 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, ९ चैत /आठौं कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन अनलाइनबाट भर्ने सुबिधा भए पनि एउटै मात्र बैंकबाट रकम बुझाउनु पर्दा अप्ठेरोमा परेको बताएका छन् । कोरियन भाषाको परीक्षा आबेदन भर्नु पहिला ग्लोबल आईएमई बैंकबाट २४ अमेरिकन डलर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो व्यवस्थाले राती देखि बैंकमा लाइन बस्नु परेको पोखरा लेखनाथ महानगर पालिकाका मालेपाटन ५ का दिवाकर पौडेलेले बताए । उनले अन्य बैंकबाट पनि पैसा बुझाने व्यवस्था भए राती देखि लाइन बस्नु नपर्ने बताए । पहिला फारम भरे पहिले पालो आउने भन्दै युवाहरु राती देखि नै लाइनमा बसेका थिए ।
पोखरामा ग्लोबल आईएमई बैंकका दुईवटा शाखा रहेकोमा दुबै ठाउँमा लामो लाइन छ । उनीहरु राती देखि नै लाइनमा बसेका थिए । भाषा परीक्षाका लागि ९ गते देखि आउँदो १८ गते दिउँसो १२ बजेसम्म अनलाइनबाट आवेदन फारम भर्न सकिनेछ । आगामी वर्ष कोरियाले १० हजार २ सय नेपाली कामदार लैजाने भएपछि भाषा परिक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र ९, २०७३ 8:36:37 PM